Sida Loo Helo Kaarka Hadiyadaha Bilaashka Ah Waqtiga Yar | 2022Xarunta Hantida
Bogga ugu weyn Sida Loo Helo Kaarka Hadiyadaha Bilaashka Ah Waqtiga Yar | 2022
Sida Loo Helo Kaarka Hadiyadaha Bilaashka Ah Waqtiga Yar | 2022
Habka ugu wanaagsan ee loogu abaal-marin karo macmiisha mas’uuliyadooda waa in la siiyo kaarar hadiyadeed oo bilaash ah. Inkastoo kaararka hadiyaddu ay kaa caawin karaan inaad alaab bilaash ah ku iibsato dukaamada la doortay, waxay mararka qaarkood u beddeli karaan lacag caddaan ah.
Kaarka hadiyadda ee rabitaanku waa kaar hadiyad oo la yaab leh oo dib looga soo ceshan karo tiro badan oo ka mid ah dukaamada Kooxda Woolworths oo ka mid ah dukaamadooda waaweyn iyo dukaamada raashinka.
Waxaad la wadaagi kartaa waayo-aragnimada wax iibsiga bilaashka ah marka aad haysato kaarka hadiyadda ee bilaa rajada ah. Oo waxaan ku tusi doonaa sida aad u heli doonto kaadhadhka hadiyadda ee bilaashka ah waqti ka yar gudaheed.
Sida Loo Helo Xor jeclaan Kaararka Hadiyada Waqtiga Yar
Halkan waxaa ah dhowr ikhtiyaar oo ku saabsan sida loo helo kaararka hadiyadda bilaashka ah waqti ka yar adigoon lacag ku bixin.
#1. Tijaabi mashiinka raadinta cusub
Awoodda Helitaanka: 2.5 / 5.0 xiddigaha
Ugu Yar Lacag -bixin: $3
Swagbucks waa mid ka mid ah goobaha abaalmarinta bilaashka ah halkaas oo aad ku kasban karto dhibcaha waxqabadyada sida qaadashada sahaminta, dukaamaysiga onlaynka ah, ciyaaro ciyaar, iyo raadinta shabakadda.
Waxaad heli doontaa dhibco mar kasta oo aad fiiriso adiga oo adeegsanaya Swagbucks (sida inaad ka dhigto mashiinkaaga raadinta caadiga ah).
Dhibcaha aad ka heli doonto goob kasta lama cayimin, laakiin waxaad heli doontaa ogeysiis mar kasta oo ay xisaabtaada ku xisaabtamaan.
Sidaa darteed, habkan lagu kasbado hadiyadaha bilaashka ah maaha mid degdeg ah, laakiin waxa wanaagsan ayaa ah inay u baahan tahay dadaal yar.
Intaa waxaa dheer, Swagbucks waxay siisaa $ 10 gunno is -qoritaan xubnaha cusub. Marka, si aad lacag uga hesho kaadhadhka hadiyadaha bilaashka ah, waxaad u baahan tahay $ 3 ama $ 25 si aad ugu beddesho dhibcahaaga lacag caddaan ah PayPal.
#2. Borokoorka badeecadaha ka baari dukaamada xaafaddaada
Awoodda Helitaanka: 3.5 / 5.0 xiddigaha
Ugu Yar Lacag -bixin: $2
Shopkick waa mid ka mid ah dukaamada ku siiya dhowr siyaabood oo aad ku kasbato kaararka hadiyadda ee bilaashka ah, oo saddex ka mid ah aysan u baahnayn kharash.
Markaad soo dejiso barnaamijka, waxaad kasban kartaa laad (dhibco) kaliya inaad ku gasho dukaamada qaarkood sida Target ama CV -yada. Markaad gudaha gasho dukaanka, waxaad kasban doontaa laadyo dheeri ah adiga oo baaraya alaabta ku jirta barnaamijka.
Waxaad u beddeli kartaa ugaarsiga qooyska, haddii aad carruur leedahay - ku madadaali inta aad ka helayso abaalmarin hawsha.
Sidoo kale, waxaad kasban kartaa dhibco badan daawashada fiidiyowyada app-ka waqtiga firaaqadaada. Qiimaha sarrifku waa qiyaastii 250 Kicks halkii doolar.
Lacag: Hel $ 5 oo bilaash ah haddii aad saxiixdo oo leh koodh DS5 oo samee dukaan gudaha 7 maalmood gudahood markii la rakibay appka.
#3. Adeegso Instagram si aad u hesho kaararka hadiyadaha
Awoodda Helitaanka: 4.5 / 5.0 xiddigaha
Ugu Yar Lacag -bixin: N / A
Bogga Instagram, shirkaduhu waxay bixiyaan alaab lacag la’aan ah. waad ku biiri kartaa hadiyadahaan oo aad ku guuleysan kartaa kaararka hadiyadda ee bilaashka ah.
Shuruucda wax bixinta ee shirkad kastaa way kala duwan tahay, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad raacdo akoonka soo dhejiyay tartanka oo aad jeceshahay sawirka, faallooyinka, ama qof ku dheji.
Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo fursadahaan waa in la raadiyo hashtags sida:
kan akhri, 10 Madal ee Kaarka Hadiyadeed ee Legit iyo Sida Loo Guuleysto
#4. U dir saaxiibbada adeegyada aad rabto
Awoodda Helitaanka: 4.0 / 5.0 xiddigaha
Markaan helno adeeg aan jecelnahay oo helno kaarar hadiyado lacag la'aan ah, waxa ugu horreeya ee aan dooneyno inaan sameyno waa inaan la wadaagno dadka nolosheenna ku nool, si aad tan u sameyso waxaad kasban kartaa abaalmarino iyo kaararka hadiyadda oo lacag la'aan ah.
Waad hubin kartaa haddii mid ka mid ah kuwa aad ugu jeceshahay uu leeyahay barnaamijyo gudbinta, Haddii ay sidaas sameeyaan, markaa waxaad qabataa iskuxirkaaga gudbinta ama koodhka oo u dir saaxiibbadaada oo ku raaxaysan doona ama ka faa'iideysan doona adeegsiga.
Ogsoonow in qof kasta oo aad tixraacdo ay u badan tahay inuu u baahdo inuu dhammaystiro ficil gaar ah, sida dejinta deebaajiga tooska ah ama ballansashada raacitaankooda koowaad ama safarkooda, ka hor intaadan helin abaalmarinta gudbintaada.
#5. Weydiiso kaararka hadiyadaha ee bilaashka ah halkii aad ka heli lahayd hadiyado
Habkani kuma jiro wax barnaamijyo ama farsamo ah waxayna u badan tahay sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee lagu heli karo kaararka hadiyadda ee bilaashka ah.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad weydiiso. Inta lagu jiro xilli-bixinta hadiyadda ama dhalashadaada iyo qoyskaaga iyo saaxiibbadaada ayaa ku weydiiya inaad rabto ma rabtaa, u sheeg inaad jeclaan lahayd kaararka hadiyadda dukaanka aad ugu jeceshahay.
Ama waxaad weyddiisan kartaa kaarka deynta ee horay loo sii bixiyay haddii aad rabto inaad ku bixiso lacag kaarkaaga hadiyadda lacag la’aan meel ka badan.
Aaway Goobihii Sahanka ee Qofku Ka Heli Karo Hadiyado Bilaash Ah?
Waa kuwan qaar ka mid ah goobaha sahan ee ugu fiican oo aad ka heli karto kaadhadh hadiyadeed oo lacag la'aan ah
Saxiix gunno: $ 10
Ka bixitaanka ugu yar: Ma jirto qaddar bixitaan oo ugu yar, laakiin kaararka hadiyadda waxay ka bilowdaan $ 3.
Swagbucks waa mid ka mid ah goobaha sahanka ugu fiican, marka la eego sida aad u kasban karto dhibco, halkaas oo aad ka heli karto kaararka hadiyadda ee bilaashka ah, iyo xaddiga lacagta ah ee adeeggu siiyay xubnaheeda (in ka badan $ 400 milyan).
Si kastaba ha noqotee, waxaad ku kasban kartaa dhibco siyaabo kale oo kale sida:
Lacag-celin ka soo adeegashada internetka
Adigoo isticmaalaya mashiinka raadinta
Sidoo kale, daawashada fiidiyowyo gaagaaban oo ku yimaadda qaybo kala duwan sida socdaalka, madadaalada, ciyaaraha.
Imaatinka habka is-diiwaangelinta waa mid degdeg ah oo fudud. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad bixiso magacaaga iyo cinwaankaaga iimaylka.
Intaa waxaa sii dheer, goobtu waxay kuu sahlaysaa inaad dhibcahaaga ku beddesho kaararka hadiyadda ee dukaamo badan oo tafaariiqle ah, sida Amazon, Best Buy, eBay, Starbucks, iwm.
Ku Xidhnow Saxiix
#2. Sahanka Junkie
Gunnada is-qoritaanka: None
Ka bixitaanka ugu yar: $5
Survey Junkie waa shirkad leh sumcad weyn waxayna leedahay in ka badan 10 milyan oo xubnood.
Waxay ka caawiyaan shirkadaha inay ogaadaan sida loo hagaajiyo badeecadooda iyo adeegyadooda. caawintaas laba siyaabood:
Waxay ku siinaysaa helitaanka badeecado ka wanaagsan mustaqbalka, hadday shardi tahay in shirkaduhu qaataan talada la siinayo.
Waxaad abaalmarin ku helaysaa macluumaadka aad bixiso
Hubi inaad si buuxda u buuxiso astaantaada, ka dib markaad is -qorto maxaa yeelay waxay ka caawineysaa adeegga inuu kugu habboonaado sahaminta saxda ah.
Sidoo kale, waxay kaa caawinaysaa inaad waqti yar ku bixiso si aad u aragto inaad u qalanto iyo inaad wakhti badan ku qaadanayso dhibco. Marka aad kasbato dhibco kugu filan, waxaa lagu badalan karaa kaadhadhka fiisada ee hore loo bixiyay, kaadhadh hadiyadeed dukaamada caanka ah sida Amazon, ama lacag caddaan ah.
#3. Baraha Nolosha
LifePoints waa madal siisa adeegsadayaasha siyaabo kala duwan oo ay ku kasbadaan dhibco, taas oo markii dambe loogu soo iibsan karo kaararka hadiyadaha tafaariiqlayaasha caanka ah.
Sidoo kale, waxaad mararka qaarkood u baahan doontaa xusuus -qor si aad u duubto waxyaabo ay ka mid yihiin dukaamaysigaaga iyo caadooyinka cunidda; si loo tijaabiyo badeecooyinka ay shirkadu kuugu soo dirto lacag la’aan; iyo in la dhammaystiro caqabadaha maalinlaha ah, sida su'aalaha deg -degga ah ee kugu abaalmariya inaad si joogto ah u isticmaasho goobta.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan LifePoints ayaa ah xadka ugu hooseeya ee lacag caddaan ah. waxaad ku iibsan kartaa dhibcahaaga kaararka hadiyadda ee bilaashka ah laga bilaabo 5,000 oo dhibcood, oo qiimihiisu yahay $ 5.
Sidoo kale, akhri tan: Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadaha Lacag La'aanta Ah Iyadoo Aan La Dhamaystirin Dalabyada
PrizeRebel waa mid ka mid ah goobaha sahanka ugu weyn ee internetka, oo ay ku jiraan in ka badan 10 milyan oo xubnood. waxaad ku kasban kartaa dhibco siyaabo kala duwan sida qaadashada sahanka, daawashada fiidiyowyada, iyada oo loo marayo gudbinta, iyo is -qoritaanka dalabyada tijaabada ah.
Waxay leedahay mid ka mid ah ka bixitaannada ugu hooseeya ee ugu hooseeya goobaha sahanka, laga bilaabo 500 dhibcood, oo lagu siinayo kaarka hadiyadda $ 5.
Sidoo kale, waxay haystaan ​​mid ka mid ah xulashada kaarka hadiyadda ugu weyn ee la heli karo, oo leh in ka badan 500 tafaariiqleyaal kala duwan.
Gunnada is-qoritaanka: $5
Ka bixitaanka ugu yar: $ 30
InboxDollars waa goob kale oo caan ka ah adduunka sahanka. Waxaad ku kasban kartaa kaarar hadiyad lacag la'aan ah dhammaystirka sahaminta. Sidoo kale, waxay xubnaheeda ku abaalmarisay lacag ka badan 59 milyan oo doollar.
Waxaa jira siyaabo badan oo lacag loogu helo InboxDollars sida ku ciyaarista ciyaaraha internetka, akhrinta emaylka, iyo baarista shabakadda. Sidoo kale, waxaad kasban kartaa lacag -celin haddii aad wax ku iibsato internetka.
Ku biiristu waa bilaash waana sahlan tahay. waxaad heli doontaa $ 5 gunno is-qoritaan ah kaliya hal daqiiqo inaad ku qorto. Sidoo kale, uma baahnid inaad leedahay xirfad ama karti gaar ah si aad u bilowdo kasbashada.
Gunnada is-qoritaanka: $ 5 shan sahan
Ka bixitaanka ugu yar: $ 3 ugu yaraan kaararka hadiyadda
Haddii aad tahay nooca qofka u fiiriya cimri dhererka caddeyn ganacsi wanaagsan, markaa waad jeclaan kartaa kan.
MyPoints waxay ku jirtay adduunka ganacsiga khadka tooska ah ilaa 1996, oo ah waqti dheer. Waxaad ku kasban kartaa dhibco adiga oo dhammaystira sahannada, ciyaaro cayaaraha, ama daawashada fiidyowyada.
Waxaad ka heli kartaa kaararka hadiyadda rabitaanka, maylka safarka, ama lacag caddaan ah adoo adeegsanaya koontadaada PayPal, mar kasta oo aad diyaar u tahay inaad dhibcahaaga kaashto.
#7. Abaalmarinta keen
Gunnada is-qoritaanka: Geli koodhka APREWARDS markaad isdiiwaangelinayso si aad u hesho 3,000 dhibcood oo gunno ah.
Ka bixitaanka ugu yar: $ 5, laakiin way kala duwan tahay tafaariiqle
Soo qaado Abaalmarintu waxay ka dhex taagan tahay abka dib-u-celinta lacagta caddaanka ah ee xaalad fudud. Ma jiraan heshiisyo badan oo la xusho, xayeysiisyo la daawado, koodhadhka wax lagu sawiro, ama dukaamo gaar ah oo aad u baahan tahay inaad wax ka iibsato.
Taa beddelkeeda, marka aad dukaamaysiga dhammaysato, kaliya sawir ka qaad rasiidkaaga, iyo Abaalmarinta Fetch waxay ku siin doontaa sumcad alaab kasta oo u qalanta dhimis.
Gunnada is-qoritaanka: $ 20
Ka bixitaanka ugu yar: $ 20
Ibotta waxay dadka ku abaal marisaa inay sameeyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin inay sameeyaan sida iibsashada raashinka. Tani waa sababta oo ah waxay u baahan yihiin alaabta, waa mid ka mid ah barnaamijyada lacag-samaynta ugu fiican ee macruufka iyo taleefannada Android. Sidoo kale, $20 gunnada ayaa ka dhigaysa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee lacag-bixinta lagu galo-is-diiwaangelinta.
Waxaad ka heli kartaa dalabyo lacag-celin ah noocyo kala duwan iyo badeecado aad caadi ahaan ka iibsato dukaanka raashinka. Sidoo kale, waxaad ku heli kartaa abaalmarin aad ku iibsato alaabta sida qurxinta iyo dharka inta badan, xitaa markaad ka hesho internetka.
Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari doontaa dalabyada kahor intaadan wax iibsan. Markaad dhammayso waxaad ku soo ceshan doontaa dalabyadaada adoo jaraya risiidka.
Markaad lacag u baahan tahay, kaliya ku wareeji dheelitirkaaga PayPal, Venmo, ama hel kaarka hadiyadda.
Hubi tan: Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda Amazon ee Lacag La'aanta ah: 24 Xeelado Lagu Helo Ilaa $ 100 Off
Gunnada is-qoritaanka: Midna. laakiin Dosh waxa uu bixiyaa $5 abaal marin ah
Ka bixitaanka ugu yar: $ 25
Dosh waa goob abaalmarin ah oo aad lacag uga heli karto caadooyinkaaga wax iibsiga. Markaad is-qorto, waxaad isku xireysaa kaarka deynta iyo kaarka deynta ee aad wax ku iibsaneyso ka dibna waxaad ku kasbataa dakhli dadban oo qaab lacag-celin ah markaad u adeegsaneyso kaararka dukaamada tafaariiqleyda ah.
Kumannaan dukaanno ah ayaa ka qaybqaata Dosh, oo ay ku jiraan silsilado qaran iyo meherado yaryar oo maxalli ah. Sidoo kale, lacagta kaashka ah ee aad hesho waxaa lagu wareejin karaa koontadaada bangiga, waxaa loo adeegsan karaa kaararka hadiyadda, ama waxaa lagu deeqi karaa hay'adaha samafalka.
Bixitaanka ugu yar: $ 2
Waxaad kasban doontaa qaddar go'an oo ah "laad" si aad u baarto alaabta, aado dukaamada aad ugu jeceshahay, iyo inaad wax iibsato, adiga oo adeegsanaya barnaamijkan abaalmarinta.
Laadadka aad kasbatay ayaa markaa lagu shubi karaa kaararka kaydka ama hadiyadaha. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale ka heli kartaa qiimo dhimis qaar ka mid ah alaabta aad iibsato.
Helitaanka kaarka hadiyadda ee bilaashka ah waxay kuu noqon kartaa hab wanaagsan oo aad hal -abuurnimo lacag ugu keydiso. Ma jiro wax xad ah tirada siyaabaha aad ku kasban karto kaararka hadiyadda ee bilaashka ah.
Qof kastaa wuxuu dhibco ku heli karaa kaarka hadiyadda ee bilaashka ah isagoo shabakadda ka dhex eegaya waqtiga firaaqada. Marka, haddii aad haysato waqti dheeri ah oo gacantaada ku jira, waad ka faa'iideysan kartaa fursadan adiga oo adeegsanaya waqtiga si aad u hesho kaararka hadiyadda.
Sida Loo Helo Baabuurkayga Lacag La'aanta: 5 Siyaabood oo Fudud
Dib u Eegista Kaararka Geedka Tiirsan: Maalmaha Dhalashada, Kirismaska ​​| Sida loo helo 2022
Ma iibsan karaa baabuur leh kaarka deynta? Sida Loogu Sameeyo Taas Waqti Yar
Sida Loo Helo Kaararka Hadiyadda ee iTunes oo Bilaash ah oo aan lahayn Sahan 2022
Ka iibinta CarMax Gaari Hoos u Dhaca | Waxa loola jeedaa?
Dib -u -eegista Sawir -qaadaha Portfolio: Aaladda Maal -gelinta ugu Fiican ee Faylalkaaga Wanaagsan
Waxaan dhaxlay faraanti dheeman ah dhawaan. Farxaddii ku timid lahaanshaha giraantan qiimaha lahayn waxay ahayd mid aan qiimo lahayn.
Amazon Prime Student Vs Prime: Sida ay u shaqayso | Waa Kuwee Qiimaheeda?
Adeegsiga Amazon Prime wuxuu ka caawiyaa macaamiisha inay keydsadaan wax badan oo Haddii aad tahay arday kuleej ah, waxaad heleysaa inaad keydiso…
Faallooyinka Mindiyaha Boker 2022: Alaabada | Fadeexad ama Sharci
Knife Life waxay inta badan ku saabsan tahay shakhsiyaddaada iyo xiisahaaga iyada oo loo marayo mindida aad jeebka ku sidato mar kasta…
Waxa jirta sheeko Shiinees ah oo caan ah oo sawiraysa hubanti la'aanta, daahfurka, iyo waxa dadka ka dhigaya inay si ka duwan wax u sameeyaan.…
19 Meelood ee Ugu Fiican ee Lagu Iibin Karo iPad Lacag Lacag Badan Ah Online [Liiska 2022]
Ma ogtahay in Apple ay soo saartay iPad Air cusub (2020) Wi-Fi + Cellular? Oh haa! tablet-ka…